Homeसमाचारकरोडौंको सम्पति भएका दम्पतीलाई आफ्नै छोराले सबै सम्पति ह’डपेर सडकमा पुर्‍याए पछि, आमा यसो भन्छिन्: (भिडियो सहित)
March 4, 2021 admin समाचार 5746
जेठो छोरा डा. प्रेमराज श्रेष्ठले काठमाडौमा भएको घर ओ’गटेको भन्दै बाबु आमाले सम्प’त्ति फिर्ता गर्न माग गरेका छन् । आज (बुधबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्म’लेन गर्दै पर्वत कुश्मा वडा नम्बर-५ का स्थायी बाबु हरिकुमार श्रेष्ठ र आमा क’मलादेवी श्रेष्ठले छोराले घरसहित आधा सम्पत्ति रोक्का गरेर कु’टपिट गर्दै आएको जा’नकारी दिएका हुन् ।
पत्रकार सम्म’लेनमा बोल्दै हरी बहादुरले सानोभर्याङमा भएको सानोभर्याङस्थित ७० हजार रुपैयाँ महिनाको भाँडा आउने तीन तलाको घर छोराले ओगटे’को बताए । उनले छोरीले इज’रायल बसेर कमाएर पठाएको १ करोड ३८ लाख रुपैयाँले पैसाले घर र घडेरी किनेको जानका’री दिए । ‘छोरीको नागरिकता हामीसँग नभए’कोले आमाको नाममा घर पास गरिएको हो ।’ उनले भने-‘तर छोराले त्यही सम्पत्तिलाई दा’बी गरेर छोरीलाई सम्पत्ति दिएको भन्दै ‘मुद्दा दिएको छ ।’
श्रेष्ठले छोरा प्रेमराजा श्रेष्ठलाई २०५८ सालमा चिनमा एम’बिबिएस अध्ययन गर्न पठाएको, ०७२ सालसम्ममा एमबि’बिएस, पिएचडी सकेर नेपाल फर्किएकोे र १४ वर्षसम्म एमबिबिएसदेखि पिएचडीसम्म आफ्नो जा’यजेथाले पढाएको बताए । उनले छोराले आफुलाई मु’द्दामा बाबु नाता पर्ने लेखेकोमा दखेसो गरे । उनले भने,‘अहिले छोराले मेरो’आमा बुबा होइन भन्छ ।’
उनले छोराले आफुलाई डा’क्टर भन्दै अंक’लोजीमा पिएचडि गरेको र सिभिल अस्प’तालमा काम गरेको सुनेको उल्लेख गरे । तर आफूहरुबीच बोलचाल न’भएको पनि उनले सुनाए । उनले तीन तलाको घरमा छोराले एकलौटी तरिकाले ओ’गटेको हुनाले आफुहरु आफन्तकोमा शरणार्थी भएर बस्दै आएको बताए । ‘१६ कोठाका घर भएर पनि हामी श’रणार्थी भएर हिड्न परेको छ ।’–उनले भने ।
कार्य’क्रममा बोल्दै आमा कमलादेवीले रा’तदिन दुःख गरेर छोरालाई हुर्काएको, पढाएको छोराले मुख छाड्दा मन दु’खेको बताइन् । ‘छोराले मलाई आज आमा होइन भन्दा बोली रोकिन्छ,’–उनले भनिन् । छोराको लागि गरेको मैले दुख प्र’माण देखाउन परेको भन्दै आराम गर्ने बेलामा मुद्दा मामिलामा हिँड्न परेको गु’नासो गरिन् ।
उनले छोरा–छोरीलाई हु’र्काएको पनि प्रमाण हुन्छ र ? प्रतिप्रश्न गरिन् । यस्तो छोरा कसैको कोखमा जन्म न’लिउन भन्दै उनले भनिन्–‘यस्तो छोरालाई जन्म दिने भगवा’नको पनि आँखा अन्धो हुनुपर्छ ।’ उनले भनिन्, ‘भगवानले यस्तालाई जन्म दिन भन्दा गर्भमै तुहियोस् र कसैलाई यस्तो छोरा नदिउन् ।’ – इताजा खबरबाट
January 12, 2021 admin समाचार 7630
आखिर लता लाई जुन रोगको डर थियो त्यसैले लगेरै छाड्यो…
February 7, 2022 admin समाचार 2199
भारतीय वरिष्ठ गायिका लता मंगेशकरको आज नि`धन भएको छ। उनकाे ९२ वर्षकाे उमेरमा निधन भएकाे हाे। कोभिड-१९ पोजेटिभ देखिए`पछि उनलाई जनवरी ८ मा मुम्बईको ब्रीच क्यान्डी अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। उनी विगत दुई सातादे`खि सघन
यि नै हुन् कोरोना सं’क्रमणबाट ज्या’न गुमा’एका ३ दाजु भाई
May 20, 2021 admin समाचार 5865
काठमाडौं । मुस्लिम समु’दायमा एक महिने इदुल फित्र ९इद०को पवित्र रोजा चलि’रहेको थियो। नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका ३ सदरलाइन ९सुनार मण्डी० का सहोदर तीनभा’इलाई रोजाकै बेला कोरोना संक्र’मण भयो र ज्या’न गयो। स्व।नजिर अहमद हल्वाई र फातिमा
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (242079)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनु`हुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (229978)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (229609)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (227987)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (226774)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (226353)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (194372)